Company Profile - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
Sleeve womupepanhau zvakakodzera
Roll ruoko kuonekwa
Thrust pesin uye gungano ondomoka
AUTO tsikwa Die Plate
Automotive tsitsi Parts
Die vachikanda Die
Die vachikanda Die & zvikamu
FOR ALTERNATOR deko
FOR Magetsi IFARIRWE
FOR akatungamirira okuvimba
FOR CHIPATARA midziyo
FOR MIMWE CATEGORIES
FOR yokuderedza bhokisi
GUIDE the bushing & Plate
PET PREFORM zviumbe Plate
Plastic muforoma the bushing
PTFE TILTING Pad Tambanudzai Kubara
zvishoma nezvishoma mumatope Block
SINTERED MAFUTA the bushing
Hutachiwana Gear Parts
Zhejiang Feiyu kushandisa michina Technology Co., Ltd.was nheyo muna 2004, hwakavakirwa pakutsvakurudza uye kukura, gadzira uye kutengesa zvishoma nezvishoma mumatope inobereka zvigadzirwa yakavakirwa Enterprises. Vanopfuura 20 huripo Michina R & D vashandi, zvigadzirwa zvave chaizvo mune motokari indasitiri, kuvakwa michini, metallurgia indasitiri, mvura conservancy uye hydropower, michina mukugadzira zvinopfuura 30 mbiru Mazinga, zviri zvipfuwo kubereka indasitiri ainakidzwa mumwe mukurumbira ari mugadziri.
Zhejiang estar zvokuimba youinjiniya Co., Ltd.. Unyanzvi iri kugadzirwa kuzvida lubricating the bushing, kufa vachikanda kufa uye kufa vachikanda zvikamu, mafuta sintered the bushing, syn mhete, uye PTFE tilting ikanyanya Thrust kubereka.
The Company noushingi kuchinja aivapo emakambani mberi. Pahwaro vachisimbisa kurovedza yemabviro wematarenda, Company zvakawanda vaiendeswa evanhu elites, zvakazara zvokurimisa yazvino utariri mashandiro uye itsva yokutengesa nzira, uye achaita chose pacharo kwenguva Kugadzirwa kuzvipira lubricating kubereka indasitiri. The kambani anoedza kutarisira uye zvakakwana kuti hurongwa. With kwayo yemhando utariri hurongwa, kambani akagadza kwakakwana (ISO9001 ISO / TS16949) Unhu utariri hurongwa kwakavakirwa yepamusoro wokuti "Quality First, Credit First uye Sustainable Growth", uye unhu kwayo uye waivako zvasvika mhiri kwemakungwa Similar zvinhu uye yemhando chechetere. Somumwe zvinozivikanwa mabheyaringi maindasitiri emakambani muna Jiangsu, Zhejiang, Jiashan Feiyu ane musoro maindasitiri marongerwo uye ichi- kuvandudza kugadzira vanokwanisa uye mukugadzira pamwero. Kubva pakagadzwa wekambani, hazvina akagadza chirongwa chakaita kukura nzira kungoramba innovate zvigadzirwa kusimbisa makwikwi akaitwa, kunze mharidzo kugadzirwa, chinoenderera kuchinja uye kugadzira zvinhu zvitsva.
Kuongorora musika, inobva nyika kuramba kusangana kuwedzera siyana vatengi, yepamusoro zvinodiwa, uye kushingaira chokuwedzera kumisika vavatorwa pamusika dzakawanda. Products vari aivigirwa kune Western Europe, America uye Southeast Asia kunyika dzinopfuura 20 uye kumatunhu. Kambani yatichawana kuwedzera chinjikira indasitiri mubatanidzwa, nokusika upfumi scale, zvakazara kuvhura minda itsva, vawane zvazvakanakira itsva bhizimisi uye kuziva yayo kukura inokosha zvinangwa, nokusika Pazvinhu ramangwana neshamwari kubva mumamiriro ose oupenyu.
Address: Zhejiang Jiashan Weitang Industrial Park Changsheng Road pamusoro wa9
Kazhinji zvishoma nezvishoma mumatope mabheyaringi vanozviriritira lubrica ...
Oiri-isina kubereka unhu
Zvishoma nezvishoma mumatope mabheyaringi vanofanira kuteerera ...
International Exhibition For Construction ...